:Bọchị: February 13, 2020
“Akwukwo njem nke anumanu a” nke ndi obodo Metropolitan nke Istanbul haziri mere ka ndi nnochite anya si otutu ógbè, ndi okacha mara ulo akwukwo, ndi otu ndi umuaka, ndi na eleta umu akwukwo. “Atụmatụ njem ụgbọ ala Istanbul nke Istanbul” na “Emebe Ihe Nleba Nke Igwe [More ...]
Egobaputara December 2019 Business Performance Scorecard nke Metro Istanbul. N'ihi ya, ụzọ ụgbọ oloko nke Istanbul ji ụgbọ elu 844 nwee ụgbọ ala 153 na Disemba wee buru ndị njem 495 nde 65 puku. Turkey kasị ukwuu [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem-Sen, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na mpụtara Catenary, nke a gbanwere ka ọ rite uru na nkwekọrịta mkpokọta nke emere na 2017, ndị ọrụ TCDD ndị ọzọ kwụrụ ụgwọ ya, n'ihi na TÜVASAŞ akwụghị ụgwọ ọnwa 2018 maka 2019 na 24. [More ...]
Hüseyin Keskin, onye isi oche ndị isi ọdụ ụgbọ elu steeti (DHMİ) na Onye isi oche, kwupụtara na ọrụ mgbatị afọ 0-6 na-akwụghị ụgwọ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Banyere isiokwu ahụ, onye isi njikwa Keskin [More ...]
Ndị na-anya bọs ahụ kelere Onye isi ala Zorluoğlu, onye zutere ha n'ụtụtụ ma were ha nye onwe ha. Onye na-esote odeakwụkwọ ukwu nke Trabzon Metropolitan Municipality Mustafa Kurtuluş, TULAŞ A.Ş. Arif, Onye isi njikwa [More ...]
Obodo Ankara na-asachapụ okporo ụzọ na ngafe nke ndị na-aga ije ji eme njem, ọkachasị n'okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ na n'okporo ụzọ na n'okporo ụzọ n'ihi oke ikuku nke dị na Isi Obodo. Urban Aesthetics [More ...]
Gaziantep Metropolitan Municipality na General Directorate nke okporo ụzọ nke oflọ Ọrụ Ọgbọ njem na akụrụngwa iji gbochie mkpọda okporo ụzọ gburugburu Hospitallọ Ọgwụ Gaziantep City, nke Minista Ahụike na-arụ. [More ...]
Ankara-Sivas High Speed ​​Train Project Kayaş-Elmadağ Ngalaba Inyeaka Nkwuputa Mwube Mwube Kọmpụta Mkpesa Akara-Sivas dị elu na ọnụahịa TL 2020 nke Turkish State Railways Management (TCDD) [More ...]
Nwa amaala ahụ ga-anwa ime ka olu nụ ya site n’igogharị na inlọ Ọrụ Trabọn Derbent agaghị arụ ọrụ. Historical Derbent Train Station dị na Kartepe, n'etiti Köseköy na Pamukova nke General Directorate of State Railways Enterprise [More ...]
Coronavirus, nke malitere na China ma na-echegbu ụwa niile, metụtakwara akụ na ụba n'ụzọ miri emi. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ kwụsịrị mmepụta na China, a kagburu Mobile World Congress. Nkagbu nke nzukọ a metụtakwara atụmatụ TOGG. [More ...]
TÜVASAŞ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na Nhazi Tralọ ụgbọ ala mbụ na ụlọ eletrik mbụ, ma na-akwadebe imepụta ụlọ ọrụ Milli Tren. Ọ bụ ezie na ụgbọ okporo ígwè eletrik eletrik dị na mba ahụ mepụtara na TÜVASAŞ nwere ahụ aluminom, [More ...]
Thezọ ndị apịtị dị n'oge ọrụ n'oge Akyazı ebe North Marmara Motorway na-asacha site na mpaghara Akyazı. Osmanbey nọ n'okporo ụzọ ahụ n'ihi ọrụ ya na ngalaba na-agafe Mpaghara Eskibedil. [More ...]
Ihe dị ka narị ndị ọrụ Artifiot na Turkish World Awardeded Artist iri na ise ga-ewere ọnọdụ na "Günsel Art Museum", nke a ga-emeghe na 20 February na Nicosia na February 700, bụ ụbọchị a ga-akwalite GÜNSEL. Ulo ala na nke ala anyi [More ...]